सर्वश्रेष्ठ शेफ - Thermorecetas साथ पाठ्यक्रम पकाउने ThermoRecines
हाम्रो पत्ता लगाउनुहोस् खाना पकाउने पाठ्यक्रमहरू लागि संसारमा केहि राम्रा सेफहरूसँग खाना बनाउन सिक्नुहोस्। अब तपाइँको प्रविधिको सुधार गर्न र जोर्डि रोका, पाको रोन्सेरो, रामोन फ्रेक्सा र उनीहरूको स्तरका अन्य शेफहरूको हातबाट एक पेशेवरको जस्तो खाना पकाउन सिक्न सम्भव छ।
एक संग मूल्य जुन € २ and र € between between बीचमा भिन्न हुन्छ, भिडियो ढाँचा मा हाम्रो पाठ्यक्रम धेरै उच्च गुणवत्ता को हो र सबै स्तरहरूमा अनुकूलित। चाहे तपाइँ खाना पकाउने दुनियामा शुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँको टेक्निकलाई पूर्ण गर्न चाहानुहुन्छ, अब यो सम्भव छ कि तपाइँले पठाउनु भएको पाठ्यक्रमलाई धन्यवाद।
तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र सबै कुकिंग कोर्सहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी तपाईंको लागि उपलब्ध छौं।
मातृत्व बन्डल यस सुपर प्रस्ताव को फाइदा लिनुहोस्!
द्वारा इरेन आर्कास बनाउँछ3वर्ष .
आज हामी तपाईंलाई बंडल को र ब्लगबाट हाम्रा प्रिय मित्रहरूको एक महान प्रस्तावको बारेमा बताउन चाहन्छौं ...
Thermomix World 2018
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ4वर्ष .
अप्रिल to देखि From सम्म, Mundo Thermomix को नयाँ संस्करण आयोजना गरीनेछ। एक अस्वीकार्य भेटघाट जुन फिचर गर्दछ ...
खाना पकाउने पाठ्यक्रमहरूमा जनवरी बिक्री
द्वारा थर्मोरसेटास बनाउँछ5वर्ष .
जनवरी बिक्री को महिना हो र Thermorecetas.com मा हामी कम हुन सक्दैनौं र यसैले भर ...
कुकि course कोर्स: होर्डि रोकासँग इन्द्रियको आइसक्रिम पार्लर
आज हामी तपाईलाई हाम्रो कुकि। कोर्सको नयाँ किस्तमा ल्याउँछौं। यस अवसर मा हामी मा गणना को सम्मान छ ...
चकलेट को बारे मा पागल, हाम्रो नयाँ खाना पकाने कोर्स
द्वारा थर्मोरसेटास बनाउँछ6वर्ष .
अर्को एक हप्ता हामी तपाइँलाई खाना पकाउने पाठ्यक्रमहरूको खण्डको बारेमा खबर ल्याउँदछौं संसारमा सबै भन्दा राम्रो भान्सेहरूसँग। खुल्ला ...
जापानी पकाउने कोर्स: सुशी र साशिमीको कुञ्जीहरू
हाम्रो खाना पकाउने पाठ्यक्रमहरूको अनुभागको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण शेफहरूद्वारा गरिएको, आज हामी प्रस्तुत गर्दछौं ...